[OFISIALY] dr.fone Toolkit - Android Data fitrandrahana: sitrana Data avy amin'ny Broken Android
dr.fone Toolkit - Android Data fitrandrahana (simba Device)
World ny 1 retrieval rindrambaiko ho an'ny angon-drakitra tapaka fitaovana Android.
Taha ambony indrindra retrieval ao amin'ny orinasa.
Sitrana sary, lahatsary, fifandraisana, hafatra, antso hazo, sy ny maro hafa.
Mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy fitaovana.
Afaka tonga any amin'ny simba fitaovana sy hahazo indray ny antontan-taratasy.
Sitrana Data avy amin'ny Broken Android in-javatra samihafa
Toe-javatra samihafa no nanohana, toy nahy simba ny lamba fanakonana ny fitaovana Android, ny varavarana lamba dia lasa mainty sy maneho na inona na inona teo aminy, tsy afaka ho any amin'ny rafitra noho ny antony tsy fantatra, tsy afaka hanokatra ny USB debug, manadino ny hidin-trano tenimiafina lamba, no valinteny ny mikasika efijery sy ny maro hafa.
Notarafina sy Preview for Free
Azonao atao ny mampiasa ny fitsarana kinova maimaim-poana torotoro io angon-drakitra Android rindrambaiko fanarenana ny scan sy topi-maso tahirin-kevitra eo amin'ny fitaovana, mba hahafahanao hanapa-kevitra izay zavatra ho sitrana.
Sitrana avy any SD Card amin'ny Android
Tsy vitan'ny hoe ny anatiny karatra fitadidiana, Android torotoro io angon-drakitra fanarenana rindrambaiko koa dia manampy ny scan sy sitrana angona avy amin'ny karatra SD ny fitaovana tapaka.
Recoverable Files avy amin'ny fitaovana Android tapaka
Afaka hanondrana ny mpifandray in CSV, HTML sy VCF endrika ny solosaina, mora ho an'ny fampiasana tatỳ aoriana. Ary hamonjy hafatra eo amin'ny fitaovana Android tapaka ao amin'ny rafitra HTML ny ordinatera ho mora mamaky teny na fanontam-pirinty. Ho an'ny sary, lahatsary, feo sy ny karazana antontan-taratasy, dia afaka hamonjy azy ireo na aiza na aiza eo amin'ny solosaina, raha mbola afaka mahita azy mora foana.
Miaraha miasa amin'ny Android Nanaovana Fitaovana
Amin'izao fotoana izao, io angon-drakitra tapaka Android fanarenana fandaharam-miasa tsara ho an'ny maro ny Samsung finday sy ny takela-bato, toy ny Galaxy S andian-dahatsoratra, ny Galaxy Note andian-dahatsoratra, sns Raha ny hafa marika ny fitaovana Android, aza manahy. Ho tonga tsy ho ela ao amin'ny hoavy tsy ho ela.
Android torotoro io angon-drakitra fanarenana tanteraka fandaharana namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Complete Android fifampifanarahana mifamadika
Mariho 3, mariho 4, mariho 4 Edge, mariho 5, mariho 5 DUOS, mariho 8, Note II
Topi-maso ny lisitry ny fitaovana nanohana >>
Android 5.0 sy teo aloha
Retrieve Files From ...
Notarafina ny fitaovana mba sitrana angon-drakitra
Notarafina ny fahatsiarovana karatra ho sitrana angon-drakitra
Fanantazana antontan-taratasy avy amin'ny tapaka Android.
Very indray ny tahirin-kevitra miaraka amin'ny fiadanan-tsaina.
Indray misy zavatra ilainao ao amin'ny fitaovana
Tsy misy loza ny tahirin-kevitra momba ny fitaovana mihitsy
Vakio ihany, tsy misy tahirin-kevitra foana na tafaporitsaka
Intuitive interface tsara ho an'ny rehetra mampiasa
Andramo ny rindrankajy maimaim-poana nandritra ny 30 andro
Mirror, fitaratra teo amin'ny rindrina, izay no tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao olo-mahery?
Eny! Wondershare Dr. Fone izany! Voavonjy ny fiainako (ao amin'ny sary)! Tsy afaka misaotra ampy ho fampivelarana fandaharana lehibe toy izany!
Tsara Android sitrana rindrambaiko
Nividy izany aho mba hahafahako indray ny zava-drehetra eo an-tanako ny Samsung Galaxy Neny Phone taorian'ny endrika.
I voafafa tsy nahy sary nalaiko avy Samsung S3 omaly alina, ary dia tezitra aho satria ny sary natao tamin'ny zanako vavy \_ 's manandrana akanjo fampakaram-bady voalohany, ary. Nivavaka aho fa izany no miasa ary izany dia !! Nila fotoana ela fa hanao izany rehetra indray ary aho fahazoan-dalana hidirana ny vokatra na iza na iza izany !! Misaotra anareo indray. Aho tena faly renin'ny ampakarina.
Ahoana no sitrana Contacts avy amin'ny Android Broken Screen Phone amin'ny
2 Fomba hiditra Android Broken Screen Phone amin'ny
Ahoana no indray hafatra an-tsoratra avy amin'ny Broken Android Fitaovana
Ahoana no mba hamaha Android Phone Broken Screen amin'ny
How to Backup Android Broken Screen Phone amin'ny
Ahoana no indray Text Message avy Broken Samsung Fitaovana
Ahoana no manamboatra Bricked Android telefaonina sy ny Tablets
Ahoana no manamboatra Samsung Galaxy Black Screen
Ahoana no manamboatra Samsung Galaxy Fahafatesana tampoka: Mainty Screen ny Fahafatesana
Sitrana voafafa na very angona avy amin'ny fitaovana Android 6000+.